Tsy Atokisan’i Dada sy Neny Aho | Tanora
Eritrereto izao: Sao dia ny zavatra ataonao no mahatonga ny ray aman-dreninao tsy hatoky anao?
Nilaza, ohatra, ny apostoly Paoly hoe: ‘Te hanao ny marina amin’ny zava-drehetra izahay.’ (Hebreo 13:18) Ary ianao? Milaza ny marina ve ianao rehefa miresaka amin’ny ray aman-dreninao an’izay toerana alehanao sy ny zavatra ataonao?
Mifidiana anarana iray eto ambany. Tena nisy ny zavatra tantarain’izy ireo.
Lova Bakoly Lova
“Nisy ankizilahy tiako be izay, dia nandefasako e-mail foana. Tratran’ny dadanay sy mamanay ilay izy, dia nasainy najanoko. Nilaza aho hoe tsy hanao intsony, nefa mbola notohizako ihany ilay izy nandritra ny herintaona. Isaky ny tratra aho, dia nifona, sady nampanantena fa tsy hanao intsony, nefa mbola nanoratra ihany. Lasa tsy natoky ahy intsony ry zareo, na tamin’inona na tamin’inona!”
Nahoana ny ray aman-drenin’i Lova no tsy natoky azy intsony?
Inona no ho nataonao raha ianao no ray aman-dreniny? Nahoana?
Inona no tokony ho nataon’i Lova tamin’izy bedy voalohany, mba hampisehoany fa azo atokisana izy?
“Tsy natokitoky ahy mihitsy ry dadanay sy mamanay taloha raha vao resaka ankizilahy. Izao vao fantatro ny antony. Nisy ankizilahy vitsivitsy nahataratara ahy, ary zokiko roa taona ry zareo. Nifampitelefaonina ela be izahay. Ry zareo koa no tena niresahako rehefa tafaraka tany amin’ny fety izahay. Tsy navelan’ny dadanay sy mamanay nampiasa telefaonina aho tao anatin’ny iray volana, sady tsy navelany ho any amin’izay toerana nety hahitako azy ireo.”
Inona no ho nataonao raha ianao no ray aman-drenin’i Bakoly? Nahoana?
Tafahoatra ve ny sazy nomen’izy ireo? Raha eny, nahoana?
Inona no tokony ho nataon’i Bakoly mba hatoky azy indray ny ray aman-dreniny?
Tianao hatoky anao indray ve izy ireo?
Toy ny zanatohatra ny dingana mila atao mba hahatongavana ho olon-dehibe azo atokisana
Voalohany, jereo hoe inona amin’ireto no tsy atokisany anao intsony.
Manaja ny ora fodiana
Mitana ny teny natao
Tsy mandanilany vola
Mamita tsara ny raharaha
Tsy miandry hofohazina
Tsy variana loatra amin’ny telefaonina sy ny tele
Miaiky fahadisoana ary miala tsiny
Faharoa, raiso ny fanapahan-kevitra. Manàna tanjona ary porofoy hoe azo atokisana ianao amin’ireo lafiny nomarihinao teo. Araho ity torohevitry ny Baiboly ity: ‘Esory ny toetranareo taloha, izay mifanaraka amin’ny fitondran-tenanareo fahiny.’ (Efesianina 4:22) Tsy maintsy ho hitan’ny ray aman-dreninao sy ny olon-kafa eny ihany hoe niova ianao.—1 Timoty 4:15.
Fahatelo, resaho amin’ny ray aman-dreninao ny fanapahan-kevitrao. Aza manome tsiny azy, fa anontanio hoe inona no ezaka mbola mila ataonao.
Tandremo: Tsy tokony hanantena anefa ianao hoe tonga dia hatoky anao ny ray aman-dreninao. Mety ho tiany ho hita aloha raha mitana ny teny nataonao ianao na tsia. Asehoy foana àry fa azo atokisana ianao. Mety hatoky anao kokoa izy ireo rehefa mandeha ny fotoana, ary tsy dia hifehifehy anao intsony. Hitan’i Bakoly hoe marina izany. Hoy izy: “Vao manao hadalana kely fotsiny ianao, dia efa tsy atokisan’ny olona intsony. Mila miezaka be ianao vao hatokisany indray. Faly aho izao fa efa manomboka matoky ahy dadanay sy mamanay!”
Fehiny: Raha asehonao fa mendri-pitokisana ianao, dia hatoky anao bebe kokoa ny olona.